ခင်မင်းဇော်: အန်တီစု ကိုယ်တိုင်ရေး ကဗျာများ
Posted by ခင်မင်းဇော် at 7:38 PM
အေးချမ်းဖို့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ငှက်လေးရေ …..
လက်ကမ်းလို့မျှော်ကာသာနေ ………
(Poem by Daw Aung San Suu Kyi)
ရှင်သန်မွေးဖွား နွေးထွေးမှုများနဲ့ထွေးပိုက်လို့ နေ ဒို့ မြေ။
(ခု) အမှောင်တွေဖုးံ၊ ထိတ်လန့် မှုမျက်လုံးနဲ့ 
ကြိမ်အုန်းမီးလိုနေ ဒို့ ပြေ။
မေတ္တာပီတိ ပျော်စရာအသိနဲ့ကြည်နူးလို့ နေ ဒို့ တစ်တွေ။
(ခု) တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား၊ အကြောက်တရားများနဲ့ 
ကြီးပြင်းလို့ နေ မုန်တိုင်းဝေ။
ရိုးသားသန့် ရှင်း ဘ၀ခင်းမှာ ဖြတ်သန်းလို့ နေ ရောင်းရင်းတွေ
(ခု)နာကျင်ထိခိုက်၊ ခောတ်ဒါဏ်ရာအမှိုက်တွေနဲ့ 
ရင်တွင်းအရှိုက် ထိခိုက်လို့ နေ။
အို….. ငြိမ်းချမ်းရေး ငှက်ကလေးရေ
ပိတ်လှောင်နေတဲ့ နေရာက လွတ်မြောက်လာတဲ့နောက်။
လွတ်မြောက်မှုအတိတ်နဲ့သံလွင်ခက်အရိပ်ကလေးကို
ယူဆောင်လာပါတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့ လိုနေတဲ့ ဒို့ နေရာလေးကို။
(ဘာသာပြန် ခံစားသီဖွဲ့ သူ - နစ်နေမန်း)
အခုတော့ ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်..
အမိမြေအတွက်…..ငြိမ်းချမ်းရေး သူ့ ဘ၀ပေးခဲ့တယ်..။
(မတန်မရာ.. မသဒ္ဓါ ဘာသာပြန်ကြည့်မိပါသည်.အမှားပါကခွင့်လွတ်ပါမေစုရေ
အမ..ခုမရောက်လာတယ်..နောက်တောင်ကျနေပီ..အိမ်ပြောင်းလို့ broadband ခဏပြတ်သွားလို့။ ခုပြန်ပီးသား ၃ခုတောင်ရှိနေပီမို့..နောက်တပုဒ်မှပြန်တော့မယ်..
Emerald cool we may be..
as water in the hands..
But OH! we might be as splinter of glass
in the capped hands..
အခု တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အမှောင်တိုက်အတိ။
ဘ၀နဲ့ ထပ်တူ ပြုခဲ့ရတဲ့
တချိန်က သန့်စင် မြူးပျော်ခဲ့
အခုတော့ ဒဏ်ရာဗ၇ပွ နှလုံးသားများနဲ့။
ပျံလိုက်တော့ မင်းချစ်တဲ့ ဇာတိထံ
၀မ်းနဲ့ လွယ် မြေတောင်မြှောက်ပေး
ငါ့ဇာတိ မြို့ ကလေး..
၀ိဘစ္ဆတွေ နဲ့ မိုးလဲချုပ်
အမှောင်ရိပ်ထဲ စုံးစုံးကို မြုပ်လို့…….
ပျော်ရွှင်တက်ကြွ၊ သန္တထဲ နေသားတကျ
လက်ရေ တပြင်တည်း..ကြီးပြင်း ခဲ့ကြတဲ့
ကြောက့်ရွံ ထိတ်လန့် ခြင်းတွေနဲ့…ရင်းနှီး မှီတင်း လို့ ….
သန့် စင်တဲ့အရိုင်းထည် တွေနဲ့ 
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလယ် ခဲ့တဲ့
ငါ့ ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော် တွေလဲ..
ဒါဏ်ရာနှလုံသားတွေနဲ့ …အားခဲ ရှင်သန်လို့ ……
ချစ်တဲ့ ဌာနေဆီ အရောက်….
ခရီးမထောက်..ပျံသန်းလို့ လာခဲ့ ပါပြီ….
“ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ဖို့ အတွက်
ဦးတည်လာနေတဲ့….လွတ်လပ် ငှက်ကလေး” ….တဲ့လေ…
၁၊ ၈၊၂၀၀၇ တွင် ဘာသာပြန်သည်
အင်း ခုထိတော့ ဒီဒေသ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေက ကိုမောင်ရင့် ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျစ်တူးရဲ့ ဘာသာပြန်လေးလည်း လာဦးမယ်ဆိုလို့ စောင့်နေပါ့တယ်။ ကျမကတော့ အားလုံး သူ့ဂုဏ်နဲ့သူ လှနေတဲ့ ဘာသာပြန်တွေချည်းပဲလို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကစပြီး အမဘလော့လာတဲ့သူတိုင်းကို မြန်မာ့ရိုးရာ လဖက်နဲ့ တည်ခင်းထားပါတယ်။ အချိန်ရတဲ့နေ့ အန်တီစု ပုံတွေကို စကင်နာဖတ်ပြီး လက်ဆောင်ဝေပါမယ်လို့ သတင်းပေးထားပါရစေ။
အမရေ.. ခုလို စောင့်ပေးတာ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ။ ကိုမောင်ရင့်ကဗျာလေး တကယ်ကောင်းပါတယ် ။ ဖတ်ပြီး ညီမ ဘာသာပြန်ဖို့ အတော်လက်မရဲ ဖြစ်သွားတယ်း) ဒါပေမယ့် ညီမ တတ်သလိုလေး (မူရင်းကို အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်အောင်)ဘာသာ ပြန်လိုက်ပါတယ် ။
လှပခြင်းတွေကို အနိဠာရုံတွေကြီးစိုး ၊
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ထိတ်လန့် ခြင်းအောက် တိတ်ဆိတ်
တက်ကြွမှုတွေ ကြောက်ရွံခြင်းအောက် တိုးတိတ် ၊
နှလုံးသားထက် ဒဏ်ရာတွေ ဒုနဲ့ဒေး ၊
ဝေဟင်ထက် ပျံဝဲ .. သံလွင်ခက်နဲ့
သူချစ်တဲ့ နေရပ်ဆီ ၊
လွတ်လပ်သော ဗမာပြည်ထဲ ။
အမရေ.. ခေါင်းစဉ်ပြန်ဖို့ မေ့သွားလို့...
တချိန်က ချမ်းမြေ့ သာယာ
အခုတော့ မှောင်မိုက် တုန်လှုပ်စရာအပြည့်။
တချိန်က လန်းဆန်း ပျော်ရွင်
အခုတော့ ကြောက်ရွံ့ ခြောက်ခြားလျက်။
တချိန်က သန့်စင် ရွှင်ပြ
အခုတော့ နှလုံးကြေကွဲ အသက်ရှင်။
အခုတော့ သံလွင်ခက်ချီ ပျံသန်းနေ
ဆရာ ဂါမဏိပြန်ဆိုထားတာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်း ဘာသာပြန်သူတွေ အားလုံးကောင်းလွန်းလို့ ဘလော့ဂါ စိုးဝှပ် တင်ထားသော မြန်မာမုန့်များကို ကြိုက်သလောက် အ၀စားကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ အန်တီစု ဓါတ်ပုံများကိုလည်း စကင်နာ ဖတ်ပြီးပါက တင်ပေးပါဦးမည်ဟု ဂတိပေးပါသည်။
သို့သော် ယခု မအားသေးသဖြင့် ခဏစောင့်ပါဦးဟုလည်း တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
လာရောက် ဘာသာပြန်သူအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရင်းနှီး ခင်မင်စွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါသည်ရှင့်။